Vavahadin-tserasera aterineto ao Kambodza, mety hanamafy ny fanarahamaso sy ny sivana · Global Voices teny Malagasy
Mety hiantraika amin'ny asan'ireo orinasan-teknôlôjia koa ilay vavahadin-tserasera aterineto vaovao
Voadika ny 06 Septambra 2021 16:59 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Português, Español, Français, English, English
Efitra infôrmatika iray ao amin'ny kaominin'i Kambodza. Sary an'i PANHA KiM (KiM MeY), fampidirana ho ao amin'ny tranonkala Panoramio ao amin'ny Wikipedia. (lisansa Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.)
Ny 16 Febroary lasa teo no nosoniavin'ny Praiminisitra HunSen ny didim-pitondràna ao Kambodza mametraka ny National Internet Gateway (NIG Sub-Decree), ao anatin'ny ahiahy navoitran'ireo mpitantsoroka marobe momba ny mety ho fiantraikany mafy amin'ny varotra elektrônika sy ny zon'olombelona.
Ny Jolay 2020 ilay fanampiny ao anaty NIG no novolavolaina ary ny Aogositra no niadiana hevitra niaraka tamin'ireo mpisehatra amin'ny fifandraisandavitra. Tolokevitra narosony ny familiana ireo serasera aterineto rehetra handalo amina vavahady tokana mba hanamoràna ny fanangonana hetra sy hanatsaràna ny tolotra. Ny Desambra 2020, naneho ny ahiahiny ny Asia Internet Coalition hoe ny rijanteny sasany ao anatin'ilay fanampiny ao anaty NIG dia mety ho ampiasaina hanakanana avy hatrany votoaty ety anaty aterineto.
Fikambanana miisa dimy amby efapolo avy amin'ny fiarahamonina sivily no namoaka fanambaràna iray vita sonia taorian'ny nanasoniavana ilay fanampiny ao anaty NIG, sy nampitandrina hoe mety hitondra mankany amin'ny fanarahamaso henjana sy fanitsakitsahana ny fiainana manokana io. Notanisain-dry zareo ny Andininy faha 6 ao anatin'ilay fanampiny ao anaty NIG, izay manome alàlana ny fibahanana ireo fifandraisana aterineto na votoaty voatondro ho “manohintohina ny fandriampahalemana, ny vola miditra amin'ny firenena, ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehana, ny kolontsaina, ny fomba amam-panao”. Voalaza anatin'ilay fanambaràna fa:
… ny fanarahamaso ataon'ny governemanta dia mamboly tontolo anjakan'ny tahotra, manosika ho amin'ny fanivanantena ary manohintohina mivantana ny fahafahan'ireo mpanao gazety sy mpiaro ny zon'olombelona tsy ho afaka hanao antsakany sy andavany ny asany.
Ity lisitra tena misy fikendrena manokana sy manjavozavo ity, amin'ny resaka antony anaovana sivana, dia manome fahefana midadasika ho an'ny RGC [Royal Government of Cambodia] hiasa toy ny pôlisy sy hanivana ireo votoaty ety anaty aterineto, miaraka amin'ny fanampiny ao anaty NIG izay manome fidirana tsy misy fetra sy fanarahamaso an'ireo rehetra fifanakalozana angondrakitra manerana ny firenena.
Marobe ihany koa ireo vondrona matahotra hoe mety hiantraika amin'ny varotra elektrônika ilay fanampiny ao anaty NIG, noho ireo fepetra fanampiny natao ho arahan'ireo orinasan-teknôlôjia:
Ahianay io fanampiny ao anaty NIG io ho lasa vato misakana an'ireo orinasan-teknôlôjia ary ho lasa antony iray ho an'ireo mpampiasa vola tsy hampiasa ny volany eto, na hiala mihitsy aza, amin'ny sehatry ny aterineto eto Kambodza.
Chak Sopheap, tale mpanatanteraky ny Ivontoerana Kambodziana momba ny Zon'Olombelona, nanamarika fa ny fotoana nandaniana ilay fepetra dia tamin'ny fotoana niampangàna ny governemanta ho mamehy ny vavan'ireo mpanakiana ety anaty tambajotra sy nila vaniny tamin'ireo mpitarika ny fanoherana.
Mampiasa saina manokana ny toedraharaha manodidina ny fotoana nandaniana ity NIG ity satria tato anatin'ny taona vitsy dia nahitàna firongatan'ny isan'ireo olompirenena voarahona, ilàna vaniny ary enjehina mihitsy aza noho ny fampiasàn'izy ireo ny aterineto sy noho ny nampiharan'izy ireo ny zony ho afaka miteny malalaka eny anatin'ireo sehatra an-tambajotra. pic.twitter.com/ehUBp2cC5w
Human Rights Watch nampifandrohy ilay fepetra fanampiny ao anatin'ny NIG amin'ireo pôlitika henjana napetraky ny governemanta HunSen nandritra ny valanaretina:
Ny NIG ao Kambodza no ilay fitaovana tsy ampy ao anatin'ny kitapom-pitaovan'ny governemanta amin'ny resaka famoretana an-tambajotra. Tsy fifanandrifiana raha toa, taorian'ny nampanginany ireo media mpanakiana nanerana ny firenena, no nandinihan'ny governemanta Hun Sen ireo kiana anaty tambajotra, mialoha ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna voaomana hatao amin'ny 2022.
Nohitrikitrihan'ny ministeran'ny paositra sy fifandraisandavitra fa nilaina ilay fepetra fanampiny ao anaty NIG mba hamolahana ny tontolon'ny aterineto “tsy milamina” eo amin'ny firenena. Nofaritany ihany koa ho “tsy mitombina, atosiky ny resaka pôlitika, tsy marina ary mifanohitra amin'ireo tanjona voalaza ao anatin'ireo fepetra fanampiny” ny fanambaran'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona.
Nolavin'ilay ministera ihany koa ny hoe kendren'ny governemanta ny hametraka andry-afo aterineto araka ny fomban'ny shinoa, na hoe mety hanangona fahatany ny angondrakitra manokan'ireo mpampiasa aterineto io. Ny tokony ho izy, hoy ny ministera nanampy, dia hitondra soa ho an'ny Kambodziàna ilay fepetra fanampiny NIG:
Hanampy ihany koa io hisorohana ny rohin-tambajotra tsy ara-dalàna miampita ny sisintany, tafiditra amin'izany ireo filokàna an-tserasera, ny fandrahonana amin'ny tambajotra, ny resa-betaveta ary ny hosoka atao amin'ny alàlan'ny aterineto.
14,8 tapitrisa ireo olona voasoratra anarana fa mampiasa finday ao Kambodza tamin'ny Mey 2020, araka ny tatitra iray avy amin'ny Mpandrindra ny Fifandraisandavitra ao Kambodza.
Tamin'ny Mey 2018, ny governemanta Kambodziana dia nandany Prakas iray iraisan'ireo ministera (fanambaràna) momba ny Fanarahamaso ireo Tranonkala sy Media Sôsialy, izay hanitatra ny fanarahamaso ny aterineto amin'ny alàlan'ny fanerena ireo masoivoho marobe ao amin'ny governemanta mba hibahana ireo tranonkala mampiantrano votoaty heverina ho “fandrisihana, famotehana firaisankina, fanavakavahana na famoronana an-kitsirano tsotra izao korontana mitondra amin'ny fanohintohinana ny filaminam-pirenena, ny tombontsoam-bahoaka ary ny rindra sôsialy”